MOSKE 67 HA : Mitohy hatrany ny fanakorontanana ataon’ny mpanolotsain’ny Praiminisitra teo aloha
Na ilay fotoam-pivavahana iraisam-pinoana tokony hitondrana am-bavaka ny fahatsiarovana ny tolona tamin’ny 29 Marsa, tetsy amin’ny Môske 67ha aza rava, tsy azo notanterahina akory noho ilay fanakorontanana nataon’i Abdoul Hady sy ny ekipany, tamin’ny zoma lasa teo. 24 mars 2019
Nivadika ho fanamparam-pahefana tanteraka mantsy ny fanendrena nataon’ Ingahy Mahafaly Solonandrasana Olivier, Praiminisitra teo aloha an’ i Abdoul Hady hitarika ny FMS na ny Fikambanan’ ny Silamo eto Madagasikara. Nomen’i Abdoul Hady baiko ohatra ireo mpiambina roa lahy omaly, hanakana ka tsy hamela ny Imam Ibrahim Jaomazava hanatrika sy hitarika ny fotoam-pivavahana maraina na “Fajr.” Vokany, nitroatra nivoaka avy ao amin’ ny toeram-pivavahana ireo mpino ka nitondra ilay Imam hiditra tany anatiny.
Tsy levon’ ny vavonin’ ingahy Abdoul Hady ny filazana ny marina ataon’ io Imam io raha ny voalaza ka izao nanaovany antsojay izao.
Raha iverenana ny zava-nisy tamin’ny zoma lasa teo dia tokony nisy ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana natao teny amin’ io Môske io, entina hitrotroana am-bavaka ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana ny 29 marsa 1947. Ingahy Aboul Hady no isan’ ny nanao ny fanomanana, saingy nihanjahanja izy satria tsy tonga nanatrika izany ny solontenam-panjakana tamin’io zoma io. Nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe mahazatra fanao isaky ny zoma dia niezaka nanakorontana tao amin’ ny Môske ny andian’ olom-bitsy miara-dia amin’ i Abdoul Hady. Tsy zakan’ny mpino io fanakorontanana io ka nisy tamin’ireo mpino no lasa nody, isan’izany ny manamboninahitra iray avy ao amin’ny Zandarimariam-pirenena.
Mila andraisana fanapahan-kevitra
Tsy takona afenina intsony, araka izany, fa tena korontana sy savorovoro eo anivon’ny mpino silamo ny fahazoan-dalana an-tsokosoko navoakan’ ny Praiminisitra teo aloha sady minisitry ny Atitany tamin’ izany fotoana ny amin’ ny fanendrena an’ i Abdoul Hady ho filoha mpitarika ny Fsm. Mila andraisana fepetra faran’ izay haingana amin’ ny fanafoanana io fahazon-dalana io ny minisiteran’ ny Atitany amin’ izao fotoana, ary tokony hanafaingana ny fanadihadiana ataon’ny Birao mahaleotena miady amin’ ny Kolikoly na Bianco.
Raha tsy andraisana fepetra haingana ity raharaha ity dia hiteraka korontana hafa indray satria fantatra izao fa tsy hanaiky mora foana ireo mpino silamo izay mandala ny marina fa hijoro hanohitra ny tsy rariny ampiharina amin’ ny fivavahan’ izy ireo. Efa akaiky rahateo izao ny volana ramadany izay volana lehibe amin’ny mpino silamo, ka raha tsy milamina dieny izao ity raharaha ity dia mety hiteraka zavatra hafa indray. Eo ihany koa ny fitrotroana am-bavaka ny firenena mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena hotanterahina ao amin’io Môske io ihany.
Tsy tokony hafenina rahateo fa tokony haharihary ho fanta-bahoaka aza ny kolikoly sy ny fanamparam-pahefana nisy tao ambadiky ny famoahana ny fahazon-dalana. Efa eo am-pelatanan’ ny Bianco moa ny antontan-taratasy mahakasika ny raharaha ary andrasana ny fiantsoana an’ Ingahy Mahafaly ao anatin’ izany. Ity farany izay fantatra fa manana antontan-taratasy maro mahavoasaringotra azy raha tsy hilaza fotsiny afa-tsy ilay “bizina masiso” nataony tany Ambohimamahamasina efa nahavoatonontonona ny anarany.